Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Emerson Palmieri Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; "Mmeri".
Anyị Emerson Palmieri Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha nke Emerson Palmieri's Biography gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, ndị nne na nna, enyi nwanyị (Isadora Nascimento), ibi ndụ, ndụ onwe onye, ​​uru dị oke ọnụ na ọtụtụ eziokwu banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ụdị egwuregwu ya mana ole na ole na-atụle Emerson Palmieri's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka amalite.
Akụkọ Emerson Palmieri nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Emerson Palmieri dos Santos, nke a maara dika Emerson Palmieri ma ọ bụ naanị Emerson mụrụ na ụbọchị 3 nke ụbọchị August 1994 na Santos, São Paulo, Brazil. A mụrụ ya na nne ya Italiantali, Eliana Palmieri na nna Brazil, Reginaldo Alves dos Santos.
Emerson nwere agbụrụ Ịtali n'akụkụ nne ya wee bụrụ nwa amaala Itali kemgbe March 2017.
Ya na nwanne ya nwoke nke okenye tolitere, Giovanni, onye bukwa boolu n’egbo-ekpe dika ya. Emerson bụ onye hụrụ bọọlụ Bekee n'anya kemgbe ọ dị afọ 15.
Ọ mere mmalite ya maka Santos mgbe ọ dị afọ 16 mgbe ọ gafesịrị site na usoro ntorobịa na site na 18 ọ guzobere onwe ya dị ka onye na-eme egwuregwu mgbe niile, na-ekele ya ka ọ na-eto eto na ọkwa kachasị elu nke ọkwa bọọlụ.
Ndị Scouts malitere ịgbagharị ya dị ka sharks mgbe ha meriri 2013 Copa Sao Paulo de Futebol Junior maka Santos U20 n'akụkụ. Ọ bụ Palermo scouts nke mechara mee ka ọ gaa Europe.
Nhọrọ ya maka ndị Italiantali bịara site na ekele nye mama ya nke si mba ahụ. Emerson jiri ohere ahụ mee ka ya na ndị ikwu ya nọkwuo nso.
Palermo klọb Italy, onye were ya mbinye ego maka oge 2014/15 nwere nhọrọ ịzụta.
Ọ bụ ihe nwute, ohere ọ ga -enwu dị ole na ole n'etiti na mgbe ọ mere naanị ngosipụta itoolu klọb ahụ atụleghị nhọrọ nke ịme nkwekọrịta ahụ ka ọ dịgide.
Ọnwụ Palermo bụ uru ndị Rome ka ha were onye dị afọ 21 wee gbazinye ego maka oge 2015/16.
Ọ nọrọ oge mbụ ya na Stadio Olimpico dị ka nwa akwụkwọ Lucas Digne, ma gosiputa nkwa zuru oke iji nyefee ego ego ya ka ọ gbatịkwuo oge.
Nke a bụ mgbe Antonio Conte si Chelsea bịara. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Isadora Nascimento? Emerson Palmieri hụrụ n'anya:
Ọ dị oke mfe ịmalite ịhụ n'anya ma jide gị n'ọgba aghara nke obi ụtọ nke ịhazi ndụ 'bụrụ otu ebighebi.
Nke a bụ ihe banyere Emerson Palmieri bụ onye ya na nwa obi ya bụ Isadora Nascimento nọ kemgbe ha dị afọ iri na ụma.
Emerson zutere enyi nwanyị ya ogologo oge Isadora Nascimento na Brazil, ha abụọ na-anọkọkwa ọnụ kemgbe ahụ.
Ndị na -agba bọọlụ na -adịrị ya mfe ịhụ Latina na -enwu ọkụ, onye kwetara na ọ na -anụ ụda nke ukwuu na -ekiri egwu Emerson.
O kwuru na mbụ, sị: “Mgbe m gara egwuregwu, enwere m ike, agbasie ike, ara na-agba m, ekele niile maka ndụ m. Footballgba bọl na-amasị m mgbe niile mana anaghị m elele anya. ”
Emerson, onye nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 200,000 Instagram na-eso ụzọ ya ma na-etinye foto nke ịhụnanya maka ndụ ya nke gosipụtara na ọ hụrụ ya n'anya nke ukwuu ma nwee nganga maka mmezu nke nwoke ya.
Isadora kwuru otu oge na foto Emerson na-asị:
"Ọ bụ ezigbo ịhụnanya, dị ezigbo ụtọ. Ọ na-agwa m okwu mara mma mgbe niile, na-eme ka ihe ijuanya ghara m ekweta na ọ ga - eme, ma na - emeso m nke ọma. Ọ na-agwa m na ndị ezinụlọ m okwu ọma. M ga-ahụ gị n'anya, Emerson! "
Emerson Palmieri Ndụ Nke Onwe:
Emerson Palmieri nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Emerson Palmieri: Ọ bụ onye okike, onye nwere mmasị, onye na-emesapụ aka, onye nwere obi ụtọ na obi ụtọ.
Adịghị ike Emerson Palmieri: Ọ nwere ike ịdị mpako, isi ike, onye na-eche naanị banyere onwe ya, onye umengwụ na onye na-enweghị mgbagha.
Ihe Emerson Palmieri nwere mmasị: Nke mbụ, ọ na-amasị mmekọrịta ya na Isadora. Emer na-ahọrọ ihe nkiri ya, na-eme ememe, na-azụ ihe dị oké ọnụ maka Isadora, na-egbukepụ egbukepụ na-enwe obi ụtọ na ndị enyi ya.
Ihe Emerson Palmieri achọghị: A na-eleghara ya anya, na-eche eziokwu siri ike ma na-emeghị ka eze.
Ọ bụ ezie na ọ ka bụ nwata, mana Emerson bụ onye ndu sitere n’ọmụmụ. Nke a amaghi otutu mmadu. Ọ dị oke egwu, ihe okike, inwe ntụkwasị obi onwe ya, onye kachasị ike na ọ siri ike iguzogide.
Emerson nwere ike iru ihe ọ bụla ha chọrọ n'akụkụ ọ bụla nke ndụ ha na-eme. O nwere ike a kapịrị ọnụ "Eze nke ọhịa" ọnọdụ.
Emerson Palmieri Untold Biography Eziokwu - Egwuru na Neymar:
Ee, dịka ekwuru na mbụ, Emerson mụrụ na Santos, Sau Paulo, wee sonye na ndị ntorobịa Santos guzobere na 2009.
Ị maara?… Ọ nọrọ klọb ahụ afọ isii wee gwuo egwu n'akụkụ Neymar n'oge ya n'ebe ahụ. Kemgbe ahụ, Emerson chịpụtara otu ihe ma ọ bụ abụọ site n'aka onye Golden Brazil.
Emerson Palmieri Ndụ Ezinụlọ:
Emerson sitere na ezinụlọ dị elu-n'etiti-ụlọ nke football football. N'ezie, ọ bụghị naanị ya bụ onye egwuregwu bọọlụ nwere aha Palmieri. O yiri ka football na-agba ọsọ na ezinụlọ ya.
Nwanne nwoke nke okenye Emerson Giovanni mụrụ site n'otu nne na nna dị ka n'oge edere, na -egwu Fluminense ugbu a na Brazil dị ka nọmba 6 ha.
Ọ na-arụkwa ọrụ dị ka onye aka ekpe wee soro ọgbakọ klọb Brazil kwaga ihe ngosi 100.
Giovani nke dị n'elu bụ afọ ise karịa nwanne ya nwoke.
Emerson Palmieri Biography Eziokwu - Stdị Ya:
Emmer bụ ndị na-ese egwuregwu. O nwere ike igwu ma ọ bụ n'azụ azụ ma ọ bụ n'akụkụ aka ekpe, ọbụnakwa jupụta na azụ azụ mgbe ọ nọ na Rom.
Emerson nwere mmasị ịga n'ihu ọbụna dịka onye na-agbachitere ya. A maara ya nke ọma maka ịmalite na iti onye na-abụghị ya aka. Nke a na-ekpughe ọmarịcha ọsọ ya, nguzozi na samba-ka ịba nka na usoro ahụ.
N'agbanyeghị na o guzo na 5ft 9in, ọ naghị atụ egwu iji etiti ya mee ihe bara uru. Emerson nwere ike iji aghụghọ ya mee ọtụtụ ihe ọjọọ n'akụkụ ya.
N'akụkụ nke ọzọ nke ubi ahụ, Emer dị mma na ọnọdụ onye ọ bụla n'otu oge n'ihi ọganihu ọ na-eme ka ọ pụọ n'ọnọdụ ọjọọ. Tupu na-abịarute Chelsea, ndị na-agbachitere nchebe ya dị mma na nke kachasị mma na Serie A.
Emerson Palmieri International Ọrụ:
Emerson nọchitere Brazil na ọkwa n'okpuru 17 n'oge 2011 South American Under-17 Football Championship na n'oge 2011 FIFA U-17 World Cup, ịbụ ndị mmeri nke mbụ. Ọ bụ onye na-enweghị mgbagha agbagha n'oge asọmpi abụọ ahụ, na-atụle ihe mgbaru ọsọ megide Chile na 16 March 2011.
Na Machị 2017, mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ nweta nwa amaala Italiantali, Emerson na-akọ na onye isi nchịkwa Gtali Gian Piero Ventura na-ezube ịgbanwere nkwado mba ya na Italytali. Ngbanwe nrọ ya bịara na 29th nke March 2017.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Emerson Palmieri Childhood Akụkọ ya na akụkọ eziokwu ndị ọzọ.